नेपाल आज | विश्वकप क्रिकेटमा कसले कति रकम पाए?
काठमाडौं । इंग्ल्यान्ड र वेल्सले सम्पन्न १२औँ एकदिवसीय विश्वकपको उपाधि इंग्ल्याण्डले जितेको छ । सुपर ओभरमा न्यूजिल्याण्डलाई हराउँदै इंग्ल्याण्डले विश्वकपको उपाधि जितेको हो । जीतसँगै इंग्लिश टिमले ४० लाख डलर पाएको छ । नेपाली रूपैयाँअनुसार यो ४३ करोड ६० लाख पाएको छ । यसैगरी उपविजेता न्यूजिल्याण्डले २० लाख डलर पायो ।
नेपाली रूपैयाँअनुसार उपविजेता राष्ट्रले २१ करोड ८० लाख प्राप्त गरेको छ । १० राष्ट्र सहभागी विश्वकपको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको अस्ट्रेलिया र भारतले समान ८ लाख डलर प्राप्त गरेका छन् । न्यूजिल्यान्डले भारतमाथि १८ रनको जीत निकाली दोस्रोपटक विश्वकपको फाइनलमा पुगेको थियो । साबिक विजेता अस्ट्रेलियामाथि इंग्ल्यान्डले सात विकेटको जीत हासिल गर्दै चौथोपटक अन्तिम दुई स्थान सुरक्षित गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) का अनुसार प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार धनराशी एक करोड डलर रहेको छ । आइसिसीका अनुसार राउन्ड रोविन लिगमा प्रत्येक खेल जित्ने राष्ट्रले ४० हजार डलर पाएका छन् । राउन्ड रोविन लिगमा भारत र अस्ट्रेलियाले समान सात खेलमा जित निकालेका थिए । यी दुवै राष्ट्रले राउन्ड रोविन लिगमा सर्वाधिक जित निकालेका कारण जनही दुई लाख ८० हजार डलर पाएका छन् । यसैगरी आयोजक इंग्ल्यान्डले ६ खेल जित्दै दुई लाख ४० हजार पाउन्ड हात पारे । राउन्ड रोविन लिगमा दुई खेलमा मात्र जितेको दक्षिण अफ्रिकाले ८० हजार डलर पाएको छ ।
प्रतियोगिताको राउन्ड रोविनमा अफगानिस्तानले एक जित पनि निकाल्न सकेन । राउन्ड रोविन लिग पार गर्ने राष्ट्रले बोनसका रूपमा एक लाख डलर पाएको छ  । सन् २००७ मा वेस्टइन्डिजले विश्वकप पहिलोपटक आयोजना गर्दा ४५ दिनसम्म प्रतियोगिता चलेको थियो ।
एकदिवसीय विश्वकप सुपर ओभर न्यूजिल्याण्ड भर्सेस इंग्ल्याण्ड
यी तीन भारतीय क्रिकेटर हुन्, जो शिखर धवनको स्थान लिन सक्छन्!
बिग बास लिगः १३औँ म्याचका लागि पनि सन्दीपले पाए मौका
सभामुख निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता आज ११ बजेदेखि २ बजेसम्म
यी ७ अवस्थामा गर्दै नगर्नुहोस् बेसारको उपयोग